သဒင်းအစုန်အလိင်မှာ… Air | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » သဒင်းအစုန်အလိင်မှာ… Air	9
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 27, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News |9comments
ခြေဥပြင်ဆင်ရန် ဗိုလ်စုတ်မှူးဂျီးဟောင်းသမ်းရွှေထံ အသနားခံ တောင်ပန်းရန် ခြင်းအမှက်တအူး၏ ပေါကျားချက်ကို ထောက်ခံသောအားဖြင့် ကိုယ်စားလှယ် စေလွှတ်ရန် IS အဖွဲ့ဝံတအူးအား အန်အယ်လ်ဒီမှ ရွေးချယ်ထားဂျောင်း သိရသည်။
ခြေဥမပြင်ရန် လွှတ်တော်မှ မဲခွဲစုန်းဖျက်ပီးနောက် ဖက်ဆစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ် အဆိပ်သားမှ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး ကြဂျင်းမှာ အောင်ဗွဲခံခြင်း မှုတ်ပဲ ခြင်ကိုက်၍ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကြက်မရေးရာကော်မတီမှ ဖြေရှင်းသီ။
ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအပေါ် ဖက်ဆစ်တပ် သဘောထား ထင်ရှားစွာ သိရပြီးနောက် ယခင် တွေဝေနေသူများ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်ကုံရာ ရွာသူ ခြီးပဒီမ်း ရှေ့စုန်းမှ ပါဝံလာပီး ဗိုဂဒေါ်သာဂူးနှင့် နယ်ဂျားစောင့် ကွင်သဗုံအတု မော်သွပ် အခြေအနေဂို စောင့်ကြည့်နေဗုံရသီ။
မဘသ၏ ရေဒီယို စီမံကိန်းကို မီဒီယာအုပဒေ မရှိအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ပယ်ခြခံရသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အင်တာနှပ် ကုမ္မဏီထောင် အသံလွှင့်ရန် MPT အားဝယ်ယူပီး MBT သို့ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ကြောင်း မန်းလေးဓါး ဗောသထေးဂျီး မဘသ ကပေမှ ပြောသီ။
ဝတပ်အား တိုက်ရန် တပ်ဒေါ်ဂျီးမှ ကြက်ဥဂျော်များအား ဆင့်ခေါ်ထားရာ အားလုံး သင်္ကန်းစီးကုန်သဖြင့် မဘသအဖွဲ့ကြီးအင်အား ပိုမိုတောင့်တင်းလာမည် ဖြစ်သီ။
မဆ အလယ် မစုန်း
နိတ်ဗံရောက်ကြောင်း တယားပွဲဒွင် ဝီကိုယ်ဒေါ်ဂျီး အစမေ့၍ အလယ်မှ ဖောက်ဟောရာ ကိလေသာတုံးအား ငှက်ကြီးတောင်ဓါးဖြင့် နှုတ်နှုတ်စင်းရန်၊ ကိုယ်ဒွင်း ကိုယ်ပတွင် လက်မခံရန် ဟောကြားခဲ့ပီး အဆုံးသတ်ကိုမူ ရေဒီယိုမှ နားထောင်ဟု မိန့်ကြားခဲ့သီ။
အနိမ့်စုန်းလုပ်ခ သုံးထောင်ကျော် သတ်မှက်လိုက်ခြင်းကို အလှုပ်ရှင်များမှ ကန့်ကွက်သောအားဖြင့် စက်ယုန်ပိတ် ဆန္ဒပြရန် ဆီစိမ်ထားသော်လည်း သူအယင်လှုပ် ငါအယင်လှုပ်.. တအူးမှ မထွက်လာ၍ မဲချစုန်းဖျက်ရာ ရွာသူ အာတီဒုံဂျီး မဲမပေါက်ကြောင်း သိရသီ။
မဲစာရင်း မှားယွင်းမှုများ နိုင်ငံနှင့်တဝှမ်း ဖြစ်ပေါ်နေရာ ဂေဇက်ရွာ မင်န်ဘာနှင့် လဆင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသူ စာရင်းမှာလည်း ထိုနည်းနှင်နှင် ဖြစ်ဖွယ်ရှိဂျောင်း ဝေဖံနေဂျသီ။
စာရေးဆလာမ ရွှေရေးထင်ထင်နှင့် ဆော်ဒီမင်းဓါး သဒင်းမှာ လံကြုတ်ဖြစ်ကြောင်း.. ဆော်ဒီမင်းဓါးဂျီးက သူ့ခေါင်းထက် ကြီးလျင် မဆင်းစားဂျောင်း ဆော်ဒီသံရုံးမှ သဒင်းထုပ်ပျံသီ။
အစိုဒေါ် ဖြူ ဖြူ ကြော်သိမ်း မဲစာရင်းတွင် မပါဂျင်းမှာ အင်္ဂလိပ်လို White White Fried Hundred Thoudsand ဝှိုက်ဝှိုက်ဖရိုင်းဟံဒရက်သောင်စင်ဟု စာရင်းသွင်းထားမိ၍ ဖြစ်ကြောင်း ရွေးဂေါက်ပွဲ ကော်မယှဉ်မှ အကြောင်းပြသီ။
အပေါ်ဟာတွေက အတီ.. ဂုဟာဂ အပြောင်အပျပ်.. … ….. ခြေဥ ပြင်ဆင်ရေး ကြိုးဗန်းချက် လွှတ်တော်ဒွင်း မအောင်မမြင် ဖြစ်ပီးနောက် တိုင်းရင်းသားပါတီများကို နှစ်သိမ့်ရန်၊ ဒီချုပ်နှင့် မပေါင်းမိစေယံ စစ်တဗိုင်းအစိုးမရနှင့် မဲခိုးဖွတ်လွှတ်တော်မှ ပြည်နယ်တိုင်းမြှားတွင် ကိုယ်ဗိုင်ဝံဂျီးချုပ်နှင့် ဥပဒေ ပြဌာန်းခွင့် ညှိနှိုင်းပေးဖွယ် ရှိနေသီ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: စောစေ စီးးစီးးးရီ လိုက် ရတာအေ..!!
တမိန့်တည်းး နာခံ ချိန်းးဘရီးးတွေ ပဲဟာ
အဆိပ် ကိုယ်စားးပြု တစ်ယောက်တည်းး ထိုင်ရင် ပြည်သူတွေ လစာပေးးရ သက်သာတာပေါ့
Alinsett @ Maung Thura says: ဟုတ်ပါ့။ ရီလိုက်ရတာ။ အူးကြောင့် လက်ရာ ဒါမျိုးစာ မဖတ်ရတာကြာ. . .
ပုံမှန် sex ရေးလိမ့်မဲလို့ မျှော်လွင့်ဘာဂျောင်းးး
မြစပဲရိုး says: . အောက်ဆုံး က အပြောင်အပျက်
“ကိုယ်ဗိုင်ဝံဂျီးချုပ်နှင့် ဥပဒေ ပြဌာန်းခွင့် ” ပေးမဲ့ အစား နိုင်ငံ အသစ် တွေသာ ခွဲပေးလိုက်တော့ ပါလား။
ဆိတ်ခုန်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2204
koyinmaung says: ကြံဖွတ်ပါတီကိုမဲပေးယင် လင်တူချင်းလက်ထပ်ခွင့်ပေးမည်ဆိုချင်းကြောင်..နတ်ကတော်များ နှင့်ရွာထဲမှ မိုးမင်းသားတို့အဖွဲ့မှအားတဲ့သရောဖွတ်မဲများရရန်စည်းရုံးဘို့ကျိုးစားနေကြခြင်း…..လစ်ပြီဝှီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လောလောဆယ်တော့ ဖွဘုတ်မှာ
၀ီဝီရဲ့မျိုးစောင့် ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦး က သဘာဝအတိုင်းရိုက်ပြတဲ့ ကိစ္စလေးက
တော့ပ် ၀မ်း သတင်းဖြစ်နေပါတယ် အားပေးကြပါကုန်
Mike says: ခြေဥမပြင်ရန် လွှတ်တော်မှ မဲခွဲစုန်းဖျက်ပီးနောက် ဖက်ဆစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ် အဆိပ်သားမှ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး ကြဂျင်းမှာ အောင်ဗွဲခံခြင်း မှုတ်ပဲ ခြင်ကိုက်၍ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကြက်မရေးရာကော်မတီမှ ဖြေရှင်းသီ။( ခြင်ဆေးခွေသွားရောင်းအုံးမှဗဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: NLD မှ IS ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်.. ကြောင်ကြီးကို ရွေးချယ်ထားသီ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကြောင်ကြီးးဒါမျုိးတွေရေးနေတာ လုပ်ကြံ ခံရမှာ မစိုးရိမ်ဘူးလား
ဏေးတစ် စပီခါလေးကတော့ သူ့ ကို လုပ်ကြံ ခံရမယ်ထင်နေပြီ
kai says: “ရှစ်ပွကြီး”တို့အုပ်စုမှ ဒေါ်စုအားမကြေမနပ်ဖြစ်ကြခြင်းမှာ ၂၀၁၂ ရွေးဂေါက်ပွဲအား သူတို့အားမတိုင်ပင်ပဲ… ၀င်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပြီး.. “စစ်ပွကြီး”တို့အုပ်စုမှ.. ခြေဥမပြင်ပေးခြင်းမှာလည်း.. ဒီချုပ်မှ အမျိုးသားညီလာခံမှ ကောက်ကာငင်ကာ နှုတ်ထွက်သွားခြင်းကို ပညာပေးနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း… ခိုင်လုံသော သတင်းရပ်ကွက်မှ … စိုသည်။…